JustControl.it: Manangona ny angon-drakitra Attribution Across Channels
Alarobia, Oktobra 7, 2020 Alarobia, Oktobra 7, 2020 Roman Sulla
Ny marketing dizitaly dia entin'ny filàna fanaingoana bebe kokoa: loharanom-baovao vaovao, fitambaran'ny fiaraha-miasa vaovao, taham-panovana tsy miovaova, sarimihetsika UA be pitsiny, sns. Raha ny hoavin'ny indostria misy antsika, mampanantena izy fa ho sarotra sy sarotra. Izany no antony ilana ireo matihanina mahomby sy maniry hahazo fahaiza-miasa azo tanterahina hiatrehana ireo toe-javatra sarotra sy sary sarotra. Na izany aza, mbola betsaka ny fitaovana efa misy manolotra fomba efa lasa iray "habe-mifanaraka-rehetra". Ao anatin'ity rafitra voalohany ity, ny
App Annie: Vola azo amin'ny finday, fampidinana, naoty, hevitra ary laharana
Zoma, Jona 13, 2014 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Ny App Annie's Advertising Analytics dia manambatra ny vola miditra sy ny doka amin'ny fampiharana finday sy takelaka miaraka amin'ny fampidinana sy vola azo. Izany dia hanome ny mpamorona rindrambaiko fahitana ny zava-bitan'ny fampiharana azy rehetra ao anatin'ny sehatra fitaterana tsotra sy tsotra. App Annie dia efa nalaza be tamin'ny famakafakana app store sy ny fitsikilovana tsena. Eny ivelan'ny vavahady, ny analytics momba ny fidiram-bolan'izy ireo dia ampidirina amin'ny Mobvista, nativeX, RevMob TapIt, Tapjoy, Taptica, AdColony, AdMob, Appia AppLift, AppLovin, Everyplay GameAds iAd Network, iAd